के यो २ उपन्यास पछि २ years बर्ष भयो? तपाईं ठिक हुनुहुन्छ। र हामी ती पढ्छौं कि गर्दैनौं? | वर्तमान साहित्य
के यी २ उपन्यासहरू २ 25 बर्ष भयो? तपाईं ठिक हुनुहुन्छ। र हामी ती पढ्छौं कि गर्दैनौं?
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | विज्ञान कल्पना, काल्पनिक, किताबहरु, नोभेला, कालो उपन्यास, रोमान्स उपन्यास
1992 यो एक बर्ष हो जुन हामी सबै बिभिन्न घटनाहरूका कारण सम्झन्छौं। पछाडि फर्कदै साहित्यिक क्षेत्र मैले केहि पाएको छु उल्लेखनीय शीर्षक त्यो प्रकाशित भयो। के हुन्छ भने, 25 वर्ष पहिले के कुख्यात उपनामहरु लाई मन पर्छ गोर्डन, ह्यारिस, मुरकामी, प्राचेट, जेनिंग्स, मोक्सिया, र एल्लो यी पुस्तकहरु प्रकाशित याद गरौं
1 शमन - नूह गोर्डन
2 कम भगवानहरू - टेरी प्राचेट
3 आकाशभन्दा तीन मिटर माथि - फेडेरिको मोसिया
4 होमल्याण्ड - रोबर्ट ह्यारिस
5 फाल्कन - गैरी जेनिंग्स
6 सीमाको दक्षिण, सूर्यको पश्चिम - Haruki Muakaami
7 ह्वाइट ज्याज - जेम्स एलोरोइ
शमान - नूह गोर्डन
गोर्डन अब नोभेम्बरमा 90 ० वर्षको हुन्छ र एउटा हो सब भन्दा लोकप्रिय अमेरिकी ऐतिहासिक उपन्यास लेखक। हुनसक्छ उसको सबैभन्दा प्रसिद्ध काम यो हो त्रयी तारांकित कोल परिवार शताब्दीहरूमा। उनको पहिलो शीर्षक प्रख्यात थियो डाक्टर र यो दोस्रो भाग हो जुन अमेरिकी पश्चिममा जारी छ र त्यो २ 25 बर्ष अघि प्रकाशित भयो। यो बन्द भयो डा। कोल.
En शमान डाक्टर रोबर्ट जेकबसन कोल आफ्नो छोरासँग आफ्नै पैतृक स्कटल्याण्ड भागे को नयाँ देशहरुमा बसोबास गर्न अमेरिका। बोस्टनमा काम गरिसकेपछि प्रख्यात शल्यचिकित्सक ओलिभर कोमेसको साथमा, रबर्ट र उनको छोरो खोजी नहुने ठाउँमा जान्छन् पश्चिम अज्ञात अध्ययन गर्न सौक इन्डियनहरूको हिलिंग परम्परा। र त्यो यात्रामा तिनीहरू प्रेम, खोजी, युद्ध र जीवन भेट्नेछन्।
कम देवताहरू - टेरी Prachett
El शानदार साहित्य को मास्टर केही वर्ष पहिले हामीलाई छोडे त्यसोभए तपाईंले उनका केही कार्यहरू पढेर उहाँलाई सँधै कर तिर्न सक्नुहुनेछ। यो २ years वर्ष पहिले प्रकाशित भएको थियो र हो डिस्कवर्ल्ड ब्रह्माण्डबाट दोस्रो स्वतन्त्र उपन्यास (पहिलो हो पाइरोमाइड्स). Prachett प्यारोडी, एक धेरै अ touch्ग्रेजी टचको साथ, अवधारणाहरू जस्तै la युद्ध र धर्महरू.
तीन मिटर आकाश माथि - फेडेरिको मोसिया
को निस्सन्देह इटालियन राजा किशोरका लागि रोमान्स उपन्यास यस शीर्षकको साथ शैलीमा यसको वंश तल सुरु भयो। उनले हामीलाई कथा सुनाए बेबी, जो एक हो मोडेल विद्यार्थी र सिद्ध छोरी। यसको विपरित, चरण हिंसात्मक र छलकपट छ। तिनीहरू दुई पूर्ण बिभिन्न संसारबाट आएका छन्, तर त्यसले तिनीहरूलाई रोक्दैन सबै अधिवेशन बाहिर एक अर्को प्रेम। यद्यपि यो विवादास्पद प्रेम हो कि उनीहरूले आफूले सोचे भन्दा बढी संघर्ष गर्नुपर्नेछ। सबैमा हुन्छ अनन्त शहर, जुन यी आधुनिक रोमियो र जुलियटको लागि उत्तम सेटिंग हुन सक्दैन।
होमल्याण्ड - रोबर्ट ह्यारिस
यो uchrony सब भन्दा बेच्ने ब्रिटिश लेखक अब २ 25 बर्षको उमेरको छ र ताजा नै छ। हामी वर्षमा छौं 1964 र एक विक्टोरियस तेस्रो राइक एडोल्फ हिटलरको th 75 औं वार्षिकोत्सव मनाउन तयारी गर्दै छ। तर तब एक वृद्ध मानिसको नग्न लाश देखा पर्छ को तालमा तैरिरहेको बर्लिन। यो एक हुन जान्छ वरिष्ठ पार्टी अधिकारी, र अर्को गोप्य सूचीमा मृत्युदण्ड यसमा सूचीबद्ध ती सबैलाई। र तिनीहरू एक पछि अर्को पतन भइरहेको छ साजिश भर्खर सुरु भएको छ।
हक - ग्यारी जेनिंग्स
Este अमेरिकी लेखक को एक प्रसिद्ध लेखक थियो ऐतिहासिक उपन्यास रूपमा सफल रूपमा शीर्षक संग एज़्टेक o यात्री। यो पनि थियो र हो आवश्यक ती सबै लामो किताबहरूको सबै प्रेमीहरूको तर धाराप्रवाह र आकर्षक पढाइ.
हक हामीलाई बताउँछ नायकका कथित सम्झनाहरू, गोथ कांटा, जो एक संग धेरै खास प्रकृति, उसको शोषण र साहस बताउनुहोस् असामान्य यौन दीक्षा दुई गुम्बामा एक सम्म असाधारण यात्रा सबै यूरोप मा। पहिलेको कम्पनीमा wyrd, एक रोमन सेन्चुरियन जो अहिले शिकारी र जाल हो र जसले उसलाई जंगलमा बाँच्न सिकाउँछ। र त्यसपछि काँडा भेट हुनेछ र मित्रता थिओडोरिक, Ostrogoths को राजा, जस को रूप मा वह सेवा प्रदान करेगा सामान्य र कूटनीतिज्ञ.
सीमाको दक्षिण, सूर्यको पश्चिम - Haruki Muakaami
प्रतिष्ठित जापानी लेखक र साहित्य नोबेल को लागी अनन्त आकांक्षी हामीलाई यहाँ एक भन्नुहोस् हराएको र फिर्ता पाएकाहरूको क्लासिक कथा. हाजिम कम वा कम खुसी मानिस, विवाहित, दुई छोरीका बुबा र ज्याज क्लबका मालिक, जो Shimamoto संग पुनर्मिलन गर्दछ, बाल्यकाल र किशोरावस्थाका साथी जो अबदेखि सुनेका थिएनन्। ती दुई बच्चाहरू मात्र हुन्, स्कूलमा उनीहरूको रुचि र रहस्यहरू साझा थिए। र अब, बर्ष पछि, आशाविहीन आकर्षित छन्। तर हाजिम पागल हुन्छ र उनको लागि सबै छोड्न इच्छुक देखिन्छ।
सेतो ज्याज - जेम्स एलोरो
El अन्तिम शीर्षक कल को लस एन्जलस क्वार्टेट १ 1992f२ मा समकालीन अपराध फिक्शनमा एक मौलिक श्रृंखला समाप्त गर्न जारी गरिएको थियो। पागल कुकुर Ellroy पात्रहरूको भाग राख्नुहोस् त्यो देखा पर्‍यो ला गोप्य र अवश्य पनि समय र वातावरण।
नायक अब छ लेफ्टिनेन्ट डेभिड क्लाइन जसको लागि मृत्यु, कुटपिट र जबरजस्ती पैसा मात्र व्यवसायिक जोखिम हो। तर को पतन मा 1958 यी फीडहरू एक i खोल्छन्पुलिस भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र सबै आँखा, शंका र आरोप Klein मा निर्देशित छन्। र उसले लोभ र महत्वाकांक्षाको संसार बनाउन सहयोग गरे पनि, जिउँदो बाहिर को लागी कोशिश गर्नेछ कुनै पनि मूल्य मा उहाँलाई।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » के यी २ उपन्यासहरू २ 25 बर्ष भयो? तपाईं ठिक हुनुहुन्छ। र हामी ती पढ्छौं कि गर्दैनौं?